Shir ay ku Qabatay Oslo Jaaliyada Degaanka Somalida Ethiopia – Rasaasa News
Shir ay ku Qabatay Oslo Jaaliyada Degaanka Somalida Ethiopia
Nov 7, 2011 Shir ay ku Qabatay Oslo Jaaliyada Dedaanka Somalida Ethiopia
Maamulka Jaaliyada Somalida Ethiopia ee Norway ayaa ku soo bandhigay shirka qorshahooda waxqabad ee mustaqbalka. Shirka ayaa waxaa soo qaban qaabiyey maamulka jaaliyada Somalida Ethiopia ee Norway, kaas oo ka dhacay magaalada Oslo taariikhdu ahayd November 5, 2011.
Kulanka ayaa lagu qabtay Ankar Hotel oo ku yaala badhtmaha caasimada Oslo, waxaana ka soo qayb galay shirka dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida cuqaasha, aqoonyahanka, haweenka, dhalinyarada iyo culimada.
Shirka waxa furay afhayeenka ahna xidhiidhka guud ee jaaliyada Cabdirashiid Cali Shocaac, isaga oo ku soo dhaweeyay xoghayaha ururka Yuusuf Ismaaciil. Yuusuf ayaa mahadnaq balaadhan ka dib waxa uu soo jeediyay warbixin kooban oo qeexaysa waxa ay jaaliyadu tahay iyo cida ay u adeegayso, ka dibna waxaa uu ku soo dhaweeyay hadalka Abwaan Cabdi Ibraahim Magan [Cirjiidh] oo ka mid ah cuqaasha laf-dhabarta u ah qurba-joogta Norway.
Abwaanka ayaa halkaa ka jeediyay gabayo iyo murti tilmaamaysa saraynta saadaasha nabada. Intaa ka dib, ayaa hadalka lagu soo dhaweeyay guddoomiyaha jaaliyada mudane Cabdirisaaq Khalif Guhaad. Guhaad oo si cilmiyaysan u soo bandhigay qorshaha wax qabad ee gudigu u diyaariyay jaaliyada, ayaa xoogga saaray laba arimood oo kala ah:
1. Horumarinta qurbajoogta asalkeedu ka soo jeedo Somalida Ethiopia sida;
Isku-xidhka, wacyigalinta iyo wada shaqaynta qurbajoogta.
Waxbrashada, dhaqanka iyo hidaha iyo tarbiyada carruurta.
Wadashaqaynta qowmiyadaha kale ee Ethiopianka ah.
Isdhexgalka qurbajoogta iyo bulshooyinka kale ee ku dhaqan Norway
2. Ka qayb qaadashada horumarka ka hanaqaaday Deegaanka Somalida Ethiopia gaar ahaan dhinacyada amaanka, bulshada iyo dhaqaalaha sida;
Ka hortagga wax kasta oo khatar galin kara qaranimada Ethiopia.
Maal gashi iyo ka faa,iidaysiga khayraadka dihin ee deegaanka.
Ka qayb-qaadashada adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada deeganka sida caafimaadka, waxbarashada, ka hortaga masiibooyinka dabiiciga ah iwm.
Mudane Guhaad ayaa isaga oo ku hadlaya magaca Jaaliyada hambalyo ku aadan munaasabada ciida u diray dhamaan bulshada ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Ethiopa dal iyo dibadba. Khudbada gudoomiya ka dib, ayaa waxaa hadal dheer oo dhinacyo badan taabanaya islamarkaana xog waran u badan khadka telefoonka ku soo jeediyay Hoggaanka Nabadgalyada iyo Caddaaladda DDS mudane Cabdullaahi Yusuf Werar, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa Waxaanu heegan u nahay hadh iyo habeenba difaaca deegaanka, waxaanan idiin suuro galinay amaan aad ku soo hirataan kuna naalootaan hadii aad qurbajoogta tihiin, kaalaya oo maal-gashada dhulka hooyo.
Ururka dhalinyarada jaaliyada oo ay hormuud ka ahaayeen gudoomiye Xiis iyo ku xigeenkiisa Fowsi Mahdi ayaa iyana kaalin libaax ka qaatay qabanqaabada iyo isku dubaridka shirka. Dhanka kale gudiga ayaa si waafi ah uga jawaabay su,aalo badan oo kaga yimid dhinaca jaaliyada, shirkuna waxa uu ku dhammaaday sidii loogu talo galay.
VOA: Ururka Ahlusuna Somaliya oo Xibin iyo Xeeb ku Eedeeyay Gacalnimada Ururada Oromo iyo Ubo